प्रहरीको गस्ती टोलीले चितवनमा प्लास्टिकका झोलामा यस्तो भेटेपछि सबै चकित !! – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत्र १६, २०७७ समय: १०:४५:४२
प्रहरीको गस्ती टोलीले चितवनमा प्लास्टिकका झोलामा यस्तो भेटेपछि सबै च’कित !! चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले शनिबार चित्तलको मासुसहित चार जनालाई प’क्राउ गरेको छ । निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएको नेपाली सेनाको वटुकदल गण प्यारिधाप गुल्म र निकुञ्जको गस्ती टोलीले उनीहरुलाई राप्ती नगरपालिका–६ बाट प’क्राउ गरेको हो ।
निकुञ्जका अनुसार प’क्राउ पर्नेमा राप्ती–६ का ३५ वर्षीया पैगी चौधरी, १९ वर्षीय साजन चौधरी, ३० वर्षीया सुमित्रा चौधरी र एक जना नाबालिग रहेका छन् । उनीहरुलाई एकता सामुदायिक वनमा पा सो थापी चित्तल मा रेको आरोपमा पक्राउ गरिएको ।
घ’टनास्थलमा गएको प्रहरीसहितको टोलीले चित्तलको मासु र चित्तल थाप्न प्रयोगको पा सो ब’रामद गरेको छ । घटनास्थलबाट १२ किलो, पैगी चौधरीको धान खेतबाट पाँच किलो र सुमित्रा चौधरीको खेतबाट एक किलो मासु ब’रामद भएको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बरालले जानकारी दिनुभयो । अपराध प्रमाणित भएमा रु २० देखि ५० हजारसम्म जरिवाना र छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ ।